Ogaden News Agency (ONA) – Allaahu Akbar, Waa Barnaamijka Abaabulka iyo Diyaarinta Bulshada Halgameysa- Rabiyoow Guul iyo Xornimo?? By: Xaaji M/rashiid
Allaahu Akbar, Waa Barnaamijka Abaabulka iyo Diyaarinta Bulshada Halgameysa- Rabiyoow Guul iyo Xornimo?? By: Xaaji M/rashiid
Posted by Daljir	/ April 24, 2017
Marka hore iga gudooma salaam ku haboon umad halgamayaal ah oo kasoo go’day meel aan ogahay, kadib waxaan jeclahay inay Akhristayaashu ila wadaagaan mawduucan aan ugu magac,darayo BARNAAMIJKA ABAABULKA IYO DIYAARINTA ee ku wajahan Soomaalida Ogadenya guud ahaanteed gude iyo dibad meel kasta ha joogeene. Halgamayaal Waxaan joognaa Qarni far waawayn ku qoraya inayna cidina ogolayn in la guumaysto isla markaana la isla tuuray Guumayste iyo kabihiisaba, haduu cadaa iyo haduu madoobaa, haduu waxtar geystay iyo haduu wax la’aan ahaaba. Waxaa muhiim ah in dadka uu caadku indhaha kasaaran yahay ay dib Maskaxda u celiyaan Qalbiyadana u sifeeyaan, si wanaagsana wax u kala arkaan.
Waxaa arinkaas ku caawin kara inay u fiirsadaan waxa ka dhacaya hareerahooda iyo Caalamkaba oo ah hardanka u dhaxeeya adoonsi,diidaha iyo adoonsi,doonaha ee ay saxaafadda ka maqlayaan ama Telefeshinada ka arkaayaan. Si aan taa u fahansiiyo inta qalbigoodu furanyahay waxaan soo gudbinayaa Tusaalayaal iyo cadeymo wax lagu qaadan karo. Waxaan isku dayayaa inaan soo uruuriyo isbadaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Qaaradda Afrika.
KU TUSAALE QAADO HALGAMOW ISBADALKA WADANKA KOONFUR AFRICA-
Waxaad ka warhaysaan in wadanka Koonfur Afrika uu kamid yahay wadamada is badalku ka dhacay ee mudada dheer ay ku hardamayeen kooxo cadaan ah oo kasoo duulay qaar kamid ah wadamada reer Yurub iyo dadkii u dhashay dalkaas. Waxyeelada ay u geysteen shacabkii madowga ahaa lama soo koobi karo, waxaase kamid ahaa falalka ugu gurracan ee ay kula kaceen inay kudiri jireen Aydooda sidaasna dhiigu ku shalaq layn jiray! Si taa looga jawaabo Shacabka Koonfur Afrika wuxuu yagleelay Urur la baxay ANC sanadkii 1912dii. Kacdoonkaas oo guushii dhaliyay 1994 wuxuu galaaftay nolosha umad aad u fara badan oon lasoo koobi karin.
Halgankooda oo aad u daba dheeraaday awgii waxaa jira shaqasiyaad si gaar ah u magac bixiya waxaana kamid ahaa madaale Nelson Mandeela. Wuxuu xabsi ku jiray in ka badan 20 sano, sidaas ayuuna ku noqday ninka hantay guushii ay waxbadan raadinayeen Reer koonfur Afrika. Guumaystayaashii cadaanka ahaa ayaa candhuuftoodii dib u liqay, kadib markay xaqiiqsadeen inayna sii wadi karin dagaalka wadaniyadda iyo is difaaca ku salaysan ee kaga imaanaya dhanka Dagaanka iyo Dadkiisa.
Si kastaba ha ahaatee waxaa sidaa kusoo gabagbooy 1994 midab takoorkii iyo Adoonsigii dunida caanka ka ahaa ee waagii baryaba saxaafada caalamku ku qureecan jirtay! Waqtigan la joogo ayuu wadankaasi yahay mid ay u shaqo doontaan Afrikada kale iyo Caalamkuba.
KU TUSAALE QAADO HALGAMOOW ISBADALKA WADANKA ERITERIYA-
Shacabka Eritrriya ayaa dhexda u xidhay xornimo waxayna ku bilaabeen inay samaystaan Urur ay iyagu iska leeyihiin oo la baxay EPLF kaasoo dhidibada loo taagay 1970kii. Waxaa ku kalifay inay hawshaa adag madaxa saartaan ayaa ahaa, inay aaminsanaayeen inay yihiin Qowmiyad la qabsaday. Waqtigaas ay halgamayeen Ruushka iyo Mareykan oo kala watay magacyada Naato iyo Waarso way kasoo horjeedeen Fikerka Reer Eriteriya waxayna aamin sanaayeen wax la yidhaaho itoobiya iyo midnimadeeda.
Dad,waynihii Reer Eriteriya wuxuu u babac dhigay dhamaan Aragtiyahaas qaldan ee caalamka, waxayna kaga jawaabeen olole iyo xoojinta halgankooda. Natijadii Dagaalku waxay noqotay inuu Madaxwaynahooda Afewarqe uu maanta Shaarubaha maleegayo isagoo ka digo rogtay nidaamkii Jabhadnimada iyo rafaadkeeda 1991.
Waxay Dawladuhu maanta u kala tartamayaan inay Arji soo qortaan iyagoo dalbanaya in Dalka laga siiyo Saldhigyo! Waxaa kale oo kamid ah Natijooyinkooda inay Wiilashooda Garbuhu casaadeen Darjooyinka ku taxan awgood. Waxaa sidoo kale Faraha xineystay kuna midaaraya Gabdhaha reer Eriteriya, wayna muuqataa inay guranayaan midhihii kasoo baxay dadaalkoodii. Dalka Eriteriya oy waxbadan ciidamada itoobiya ku amar kutaag,laynayeen ayaa maanta leh Xuduud ku dhawaaqeysa” ii soo maraa malagii galaa!
KU TUSAALE QAADO HALGAMOOW ISBADALKA WADANKA SUUDAAN-
Waxaa ka mid ah wadamada uu isbadalku ka dhacay wadanka Suudaan. Sidaad la socotaan Qowmiyadda ku dhaqan wadanka Suudaan koonfurtiisa ayaa sheegatay in la dulmay ama ay yihiin shacbi la qabsaday. Arinkaa way ka dhiidhiyeen waxayna samaysteen ciidan labaxay SPLA oo uu hogaaminayay Mr John Grang kasoo isu taagay inuu dadkiisa ka hoos bixiyo Suudaan inteeda kale, balse halgan dheer kadib waxay hanteen hamigoodii uu dhiigga badani ku daatay ee ahaa xornimada. Ruux waliba ha ogaado Ururka aan magiciisa soo xusay ee Xorriyadda dhaliyay waxaa la aas aasay 1983, waxaana halkaa ka muuqata inay aad u dadaaleen.
Waxay adeegsadeen Qalin iyo Qori ee majirin cid baryo wax ku siisay. Ciidankii Qaranka ee suudaan iyo madaxdii dalka ayaa kudaalay Gulufkii ay soo qaadayeen Mintidiinta Jabhadda SPLA kadibna waxay ogolaadeen inay kula xaaltamaan si waafaqsan Qawaaniinta dunida u taala. Markay go’een 2011 ayay Aduunyadu baratay Magaaladooda caasimadda ah ee Jubba. Runtii waxaan anigu kamid ahaa dadkii bartay magaaladaas intay xorriyadda qaateen kadib. Warkayga ku saabsan Koofurta suudaan waxaan kusoo koobayaa “Nin waloowba Allahaa sug.
KU DAYASHADA QOWMIYADAHA XOROOBAY IYO MUDNAANTEEDA-
Hadaba bulshada Soomaalida Ogadenya oo ah dadka aan ku qulaaminayo Tusaalayaasha Farta waawayn ku qoran waxay isgu jiraan dhowr nooc oo kala duwan. Qolada koobaad waxay noqdeen Talo keene, qolada laabdana waxay noqdeen Talo raac, sidaasayna ku halgamayaan labadaasi. Qolada sadexaad waa koox yar oo Taliska woyaanuhu ku adeegto, waana kuwo mar kasta loogu baaqayo inay Safka Guumaystaha kasoo baxaan. Qaar badan oo iyaga kamid ah ayaa arrinkaas ajiibay oo u baxsanaya koox koox markay fursad helaan. Waxaa jira qolo kollayba aan filayo inuu Waagu ku baryi doono, dhulkuna ku cidhiidhyami doono sida laga bartay sooyaalka Taariikhda Dunida intaan ka war hayno.
Maqaalkan oon ugu magac daray abaabulka iyo diyaarinta bulshada waa mid xambaarsan hal farriin ah oo Maar ka sameysan taasoo ah Reer Soomaalida Ogadeniyow ku dhuujiya guntiyada Suumanka, Garka iyo Martana adkaysta maadaama aad fadhidaan Gagi banaan oy ka hayaameen Reer Koonfur Afrika, Reer Eriteriya iyo Reer Koonfurta Sudaan. Waxaan shaki igaga jirin inay Mandiqada Ogadenya ay maalin malmaha kamid ah daba ujeedin doonto waxa loogu yeedho Itoobiya. Markaan sidaa leeyahy la iima waxyoonin kumana riyoonin ee waa kalsoonida aan ilaahay ku qabo, Dad badana waa ila mid. Murtida iyo Dhambaalka aan dirsanayo waa- Rabiyoow Guul iyo Xornimo Barako leh??
Waxaan kusoo xidhayaa Qoraalkan anigoo cadeynaya inuu guumaysigu yahay Cadaab aduunyo cidii ku qanacdana ay galayso Safka Nacasyada iyo Damiinada!
Lasoco Qeybta 2aad ee Barnaamijka hadii Rabi idmo